यी हुन् संसारका सबैभन्दा हानिकारक खानेकुरा - यस्ता छन् पकाएर र मिसाएर खान नमिल्ने खानेकुरा - ज्ञानविज्ञान
हामीहरु हरेक दिन उठ्दा बस्दा यस्ता हजारौँ हानिकारक खानेकुराहरु खाने गर्दछौँ जसले हाम्रो शरिरमा हानीकारक प्रभाव पार्ने गर्दछ । यहाँ हामी यस्ता खानेकुराहरुको बारेमा कुरा गर्दै छौँ जुन संसारको सबैभन्दा बढि हानिकारक खाद्य पदार्थ हुन् ।
१. जमाइएको खानेकुराः
कोही मानिसहरु जमाएका खानेकुराहरु बजारबाट किनेर ल्याउने गर्दछन् र घरमा ताताएर खाने गर्दछन् जुन निकै हानिकारक हुने गर्दछ । यसमा क्यान्सर पैदा गर्ने तत्वको मात्रा धेरै हुने गर्दछ ।
२. तारेका खानेकुराः
बजारमा निस्केका बेला तारेको खानेकुरा कम मात्रामा खानुहोस् किनभने यसमा प्रयोग गरिएको तेल निकै अस्वस्थकर हुने गर्दछ ।
३. प्याक गरिएका चिप्सः
यसमा हानिकारक कम्पाउन्ड पाइने गर्दछ जसले क्यान्सरको खतरा बढाउन सक्छ । यसलाई धेरै नखानुहोस् ।
सोडामा धेरै मात्रामा चिनिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसको सेवनले तपाईंलाई मोटो बनाउँदछ र यो तपाईंको मुटुको लागि पनि निकै घातक हुने गर्दछ ।
धेरै बर्गरमा यस्ता पदार्थ पाइने गर्दछ जुन तपाईंको शरिरको लागि हानिकारक हुने गर्दछ । यसमा प्रशस्त मात्रामा नुुनको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने यसमा प्रयोग गरिने ससले तपाईंको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गर्दछ ।
६. फ्रेन्च फ्राईः
फ्रेन्च फ्राईमा नुुन र तेलको मात्रा धेरै हुने भएकाले तपाईंलाई यसले मोटो बनाउँछ ।
७. माइक्रोवेभ पपकर्नः
यो खानाले तपाईंलाई क्यान्सर हुने गर्दछ किनभने यसमा घातक नुन र तेल पाइने गर्दछ ।
८. नुनले भरिएको स्न्याक्सः
यस्ता स्न्याक्सले तपाईंलाई मोटो बनाइरहेको हुन्छ र अरु रोगहरुका लागि पनि यो जिम्मेवार हुने गर्दछ ।
९. सेतो चामलः
सेतो चामलबाट टाढै बस्नुहोस् । यसमा निकै धेरै कार्बोहाइड्रेट हुने भएका कारण तपाईंको शरिरमा नकारात्मक असर पुर्याउने गर्दछ ।
१०. कृत्रिम स्वादः
यस्ता कृत्रिम स्वादहरु केक, पेष्ट्री अथवा आइसक्रिममा पाइने गर्दछ जसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई बिगार्ने गर्दछ ।
पकाउन नमिल्ने खानेकुरा :
खानेकुरा हामी किन खान्छौ ? सामान्यत यसको जबाफ हो, भोक मेट्न । खानाको सम्बन्ध भोकसँग मात्र छैन । खाना त्यस्तो स्रोत हो, जसबाट शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई प्रोटिन, क्याल्सियम, कार्बोहाइडेट, फाइबर आदि आवश्यक हुन्छ । यी सबैको स्रोत खाना नै हो। त्यसैले खाना खानु भनेको पेट भर्नु मात्र होइन, शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व परिपूर्ति गर्नु पनि हो।
खान नजानेर रोगी
भन्ने गरिन्छ, जति मान्छे खान नपाएर मर्छन्, त्यो भन्दा बढी खान नजानेर । अर्थात खानेकुरा पौष्टिक तत्वको स्रोत त हो, तर त्यसलाई सन्तुलित ढंगले सेवन गर्नुपर्छ स्वस्थ्य ढंगले सेवन गर्नुपर्छ । खानेकुरा कसरी, कहिले, कति खाने भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्छ।
खानेकुरा पाउनसाथ हामी जथाभावी खाइदिन्छौ । त्यसले पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ । कतिपय खानेकुरा शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ । कति खानेकुरा आफैमा राम्रो हुन्छ । तर, त्यसलाई अर्को खानेकुरासँग मिश्रण गर्दा त्यो बिषालु बन्छ । यस्ता खानेकुरा र खाने शैलीले हामीलाई रोगी बनाउन सक्छ ।
स्वस्थ्य, सन्तुलित र सुपाच्य
खानेकुरा सन्तुलित हुनुपर्छ । स्वस्थ्य हुनुपर्छ । सुपाच्य हुनुपर्छ । दिनभर सेवन गरिने भोजनमा ति सबै तत्व हुनु आवश्यक छ, जो हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ । यदि त्यसको परिपूर्ति भएन भने हाम्रो प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हुन्छ । प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर भयो भने शरीरमा रोगले प्रवेश गर्छ । त्यसैले कमजोरी, रोग आदिसँग जुध्नपनि खाना खानुपर्छ । तर, त्यो स्वस्थ्य, सन्तुलित र सुपाच्य हुनुपर्छ ।
काँचो खानु फाइदाजक
कति फल वा सब्जी हामी पकाएर, भुटेर, उसिनेर खान्छौ । यसरी खाँदा फरक स्वाद त पाउन सकिएला तर, त्यसमा रहेको पौष्टिक तत्व भने पाइदैन ।
सब्जी, फल आदिलाई स्टिम गर्दा, प|mाइ गर्दा त्यसमा रहेको पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्ता खानेकुरा सलादको रुपमा काँचै खानु राम्रो हो । तर, सबै खानेकुराको प्रकृति एकै हुँदैन । कतिपयलाई पकाएर पनि खानुपर्ने हुन्छ । यहाँ काँचो खानुपर्ने फल तथा सब्जीबारे जानकारी दिइएको छ ।
नरिवलः काँचो नरिवलले शरीरलाई हाइड्रेट राख्न सहयोग गर्छ । यसमा केहि किसिमको हेल्दी फ्याट रहेको हुन्छ । सुख्खा नरिवलमा यस्तो गुण पाइदैन ।
भेंडे खुर्सानी भिटामिन सिको एकदमै राम्रो स्रोत हो । अमेरिकाको नेशनल इन्स्िटच्युट अफ हेल्थका अनुसार भेंडे खुर्सानीलाई तीन सय ७५ डिग्रीमाथि पकाउँदा यसमा रहेको सबै न्यूटि्रएन्ट्स नष्ट हुन्छ ।
ब्रोकाउली भिटामिन सि र क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो । यसमा एक प्रकारको सल्फोराफेन पाइन्छ, जसले रक्तचाप कम गर्छ । साथै मुटुको रोग कम गर्छ । तर, जब यसलाई उसिन्छ वा पकाइन्छ, तब त्यसमा रहेको सल्फोराफेन ७० प्रतिशत कम हुन्छ ।
स्याउ सदाबहार फल हो । सर्बगुणी पनि । यो जुनसुकै अवस्थामा खान मिल्छ । यसमा न्यूटि्रएन्ट्स र मिनरल्स हुन्छ । तर जब स्याउलाई सुखाएर खाइन्छ, त्यो सबै नष्ट हुन्छ । कतिले बच्चा वा बिरामीलाई स्याउ उसिनेर खान दिन्छन्, यसो गर्दा स्याउको क्यालोरी र कार्बोहाइड्रेट बढ्छ । यसले सुगर लेभल बढाउने काम गर्छ।
अंकुरित गेडागुडी स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ । यसमा भिटामिन सि, फाइबर, कपर, म्याग्निशियम पाइन्छ। तर, जब अंकुरित गेडागुडी उसिनेर वा पकाएर खाइन्छ यसको पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ, खासगरी भिटामिन सि।
कतिले स्वादका लागि ड्राई फ्रुट्सलाई भुटेर वा तारेर खाने गर्छन् । यसले गर्दा त्यहाँ रहेको आइरन, म्याग्नेसियम, फस्फोरस नष्ट हुन्छ।
यी खानेकुरा मिसाएर खानु हानिकारक :
हामीले केहि खाने कुरा अन्य चिजसँग नमिसाई खान्छौ भने केहि खानेकुरामा केहि अन्य चिजसँग मिसाएर खानुमा स्वादै नै बेग्लै हुुन्छ । तर, हामीले स्वादका लागि मिक्स गरेर खाएका केहि खाने कुराका बोरमा ज्ञान राख्नु जरुरी छ । केहि खाने कुरा यस्ता हुन्छन् स्वादका हिसावले मिक्स गरेर खादा मिठो भए पनि स्वास्थ्यका हिसावले एक्दमै हानिकारक हुन्छ । यि दश खानेकुरालाई कहिल्यै नमिसाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
१. भटमास र दुध एकैसाथ खाएमा पत्थरी हुनसक्छ ।
२. गुर्जो र तुलसी एकैसाथ खाएमा अम्लपित्त हुनसक्छ ।
३. माछा र सक्खर सँगै खानुु हुँदैन यसले पित्त विगार्छ् ।
४. परेवाको मासु, दुध र मह लामो समय सँगै सेवन गरेमा गलगाँड हुनसक्छ् ।
५. भिण्डीको साथ दही मोहि, घ्यु, दुध खानु हुदैन, खाएमा अम्लपित्त बढ्छ ।
६. बाँसको तामा, बडरको फल, मह र दुध सँगै खान हुदैन, यसले वीर्य नास हुन्छ् ।
७. दुधको साथमा घ्यु अन्डा,रुखकटहर,कोदाको ढिंडो र फापरको ढिडो खानु हुदैन ।
८. दुधको साथमा बडर, काँचो केरा, आँप, जामुना, तित्री, ओखर, दारिम नरिवल खानु हुदैन । यसरी खाएमा दम हुने सम्भावना हुन्छ ।
९. करेलामा साग वा भिण्डी एकसाथ पकाएर खान हुदैन । खाएमा अम्लपित्त बढ्छ ।
१०. हाँस वा बकुल्लाको मासु खाएको बेला गेडागुडी र कालो दाल खानु हुदैन । यसरी खाएमा क्यान्सर समेत हुन सक्छ ।
Don't Miss it गर्भवती महिलाले बदाम खानुको यस्तो छ अचुक फाईदा – जान्नुहोस् बदाम खानुको फाईदा
Up Next के तपाई सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने गर्नुहुन्छ ? थाहापाउनुहोस् सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने कि नछोडाइ खाने ?
हाम्राे शरिरकाे मुटुपछिकाे महत्त्वपुर्ण र्पाट कलेजो कसरी स्वस्थ राख्ने ?